अमेरिका नेपालको पक्षमा, भारतलाई पस्यो चिसो !!
काठमाडौँ – नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल सार्वभौम देश भएकाले अबदेखि अमेरिकाले त्यही अनुसारको कुटनीति अबलम्बन गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार साँझ पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गर्दै लुलेले अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको बताएका हुन् ।
उनले यो भन्दा अघि भारतलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको विश्लेषण हुने भएको भएपनि अब यसमा परिर्वतन भएको बताए । भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर भइरहेका बेला सहायक विदेश मन्त्री लुले दक्षिण एसियाका अरू मुलुकलाई भारतसँग नराख्ने बताएका हुन्। नेपालमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चासो यो मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौम भइरहोस् भन्ने रहेको लुले बताए।
‘नेपाल ठूलो देश छ र दुई ठूल्ठूला देश यसका छिमेकी छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम रहिरहोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ,’ लुले भने,‘अर्कातिर नेपाल धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो। हामी त्यो सम्भावनालाई सबैको विकासमा बदल्न सहयोग गर्न चाहन्छौं र नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउन चाहन्छौं।’
भारतपछि विभिन्न देशमा राजदूत बनेर काम गरेका लुलेलाई दुई महिना अघिसम्म यो क्षेत्र पूरै हेर्नु पर्ने जिम्मेवारी आएको थिएन। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामला हेर्ने जिम्मेवारी पाएपछि उनले आफ्नो बुझाइअनुसार काम थाले।
‘भारतसँग हाम्रो धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। हाम्रो सम्बन्धका विभिन्न आयाम छन्। तर भारतसँगै दक्षिण एसियाका अरू मुलुकलाई पनि एउटै टोकरीमा राख्दा अरू मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध प्रशासनिकमात्रै हुन्छ,’ लुले भने।
यसको थप व्याख्या गर्न उनले सँगै रहेकी उप–सहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङलाई अनुरोध गरे। किडरलिङ पहिलो पटक नेपाल आएकी हुन्।
‘लु सहायक विदेश मन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँले मलाई यो क्षेत्रमा भारत र अरू मुलुकहरू नेपाल, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंकालाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्छ भन्नुभयो,’ किडरलिङले भनिन्,‘त्यसो गर्दा अरू मुलुक मर्कामा पर्दैनन् र द्वीपक्षीय सम्बन्ध मजबुद् हुन्छ। अब हामी नेपालसहित दक्षिण एसियाका अरू मुलुकलाई भारत सँगै राखेर हेर्दैनौं, छुट्टै हेर्छौं। त्यही भएर म यहाँ आएकी हुँ।’
पछिल्लो समय अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध गहिरिँदो छ। चीनसँग चिसिएको दुबै देशको सम्बन्धले उनीहरूलाई झन् नजिक बनाइरहेको छ। यो क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कम गर्न बनेको क्वाड गठबन्धनमा उनीहरूसँगै छन्। रणनीतिक गठबन्धन क्वाडमा भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित छन्।
‘एमसिसी ऋण होइन, अनुदान हो। संसारका थोरै मुलुकले मात्रै यो पाएका छन्। पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने सम्बन्धित देशका सरकारले नै छानेका छन्। अनुदान लिने कि नलिने निर्णय गर्न नेपाल सार्वभौम छ,’ लुले भने,‘तर धेरै ढिला भयो भने पैसा अन्त जान सक्छ।’
तपाईंले नेपाली नेताहरूलाई एमसिसी पास गर्न कुनै समय–सीमा भन्नुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा सहायक विदेश मन्त्री लुले समय सीमा नभए पनि अब एमसिसीबारे निर्णय गर्न नेपालले धेरै ढिला गर्न नहुने बताए। ‘यसअघि नै धेरै समय भइसकेको छ। अझै धेरै ढिला गर्नु राम्रो हुँदैन,’ लुले भने।
नेपाली नेताहरूसँगको कुराकानीका क्रममा एमसिसीबारे उनीहरूको धारणा सुनेर आफू आशावादी भएको उनले बताए। नेपालमा एमसिसीबारे केही गलत सूचनाहरू रहेको आफूले बुझेको उनले बताए। त्यस्ता गलत सूचनाका पछि कुनै बाह्य कारण छ भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सहायक विदेश मन्त्री लुले यसमा बाह्य असर हुनुपर्ने कारण नभएको बताए।
‘नेपालले एउटा मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन अर्कोसँग बिगार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालले चीन, भारत, जापान, बेलायत, युरोपियन युनियनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाओस् र विकास गरोस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ,’ लुले भने।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीका आफ्नै जटिलता भएकाले निर्णय गर्न केही समय लाग्नु स्वभाविक भएको लुले बताए।नेपालको राजनीति निकै जटिल भए पनि नेताहरू निकै फरासिला भएका आफूले पाएको उनले बताए।
‘यहाँको राजनीति निकै जटिल छ तर नेताहरू निकै फरासिला छन्। उनीहरू एक(अर्कासँग कुरा गर्छन् र आफूलाई लागेका कुरा भन्छन्,’ लुले भने,‘प्रचण्डलाई भेट्दा त मलाई रोचक लाग्यो। संसारका धेरै मुलुकमा युद्ध निकै रक्तपात भएर सकिन्छ। यहाँ त हिजोका विद्रोही अहिले नेता छन्।’